Fiheverana voalohany momba ny LG X Power, ny terminal izay maharitra ary maharitra ... | Androidsis
Fiheverana voalohany an'ny LG X Power, terminal misy bateria matanjaka
Manuel Ramirez | | LG, hevitra
Androany isika nifantoka loatra tamin'ny "sakafo matsiro" izay entin'ireo mpanamboatra antsika, izay mazàna ireo izay manompo mampiavaka azy ireo amin'ireo mpifaninana sisa. Antsoy izy ireo fa fakan-tsary roa, efijery tsy misy bezela na fanampiana virtoaly a la Google Assistant, mahatonga antsika hanadino ny iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra amin'ny smartphone: ny fiainana bateria.
Eto no nitiavan'ny orinasa Koreana nametraka ny dantelina tamin'ny LG X Power, terminal iray miaraka aminy 4.100 mAh dia hamela anao hahatratra 7 ora be dia be ny fotoana an-tsarimihetsika tsy misy bateria 18%. Fahafahana bateria miavaka hananana fampiharana toa ny Facebook sy ny maro hafa izay mampiasa be loatra ny bateria napetraka eo amin'ny toeram-pitsapana, toy ireo izay manana geolocation mavitrika. Aza adino fa miresaka terminal iray izay mitentina € 179 € isika.
1 Fihetseham-po voalohany
2 Fa misy hafa ankoatry ny bateriny
3 Izay tsy tiako
4 Amin'izay tazomiko
Rehefa amidy aminao ny marika iray izay ireharehany ny batterany tena tsara dia inona no azo atao? Apetraho ireo fampiharana matevina indrindra ary ampiasao amin'ny fampiasana bebe kokoa hahitana hoe faharetana inona no ananany. Ao amin'ny LG X Power izay ananako tato ho ato, ny zavatra nataoko voalohany dia ny fametrahana ny app Facebook, izay efa fantatsika ny fomba ampiasana azy amin'ny fanjifana bateria.
Ao amin'ny horonan-tsary no anehoako ny fiheverana voalohany ahitanao tsara ny fomba misy an'ity terminal ity, tsy manana bateria 18%, tonga amin'ny 7 ora tsy misy olana. Ary ireo adiny 7 ireo dia tratra tamin'ny alàlan'ny filalaovana Dan the Man betsaka, amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy vitsivitsy ary ny fiasan'ny GPS matetika. Noho izany, raha mitandrina bebe kokoa ianao mandritra ny andro na amin'ny fametrahana fampiharana sasany dia mety hahatratra 9 ora ianao raha tsy misy olana lehibe.
Io fahaizana io tokoa no ny iray dia raiki-pitia amin'ny LG X Power, satria, raha mankany amin'ny ambiny isika, dia manara-dalàna tanteraka izy ireo hanolotra traikefa tena tsara amin'ny teny ankapobeny nefa tsy voaloton'ny ankamaroan'ny zavatra. Izay saika hazavaina amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Fa misy hafa ankoatry ny bateriny
Ny iray amin'ireo zavatra tsy ampoizina indrindra amin'ity terminal ity dia ny fananana efijery 5,3-inch misy vahaolana HD. Io fanapahan-kevitra io dia 720p ary na dia toa kely aza ho an'ny terminal misy 5,3 ″ eo amin'ny efijery, dia tsy teboka azo kianina mihitsy izany, fa ny mifanohitra amin'izay no izy. A IPS LCD tontonana izay toa tsara ary izany dia manampy ny fitaovana tsy handany bateria betsaka toy ny an'ny 1080p vahaolana. Izay no antony namonoan'ny LG vorona roa tamin'ny vato iray tamin'ity spec ity: ny fantsom-batana ambany ho an'ny efijery tsara tarehy.
Ity terminal ity manolo-tena mora foana amin'ny fanjifana haino aman-jerysatria mandeha tsara ilay feo. Any aoriana no misy azy, saingy tsy manome izany fahatsapana halavirana izany izay mitranga amin'ireo fantsona hafa izay misy ny fanamafisam-peo amin'ny toerana iray ihany.
Mikasika ny fampisehoana, tsy nisy fotoana nahatsapako ny tsy fahampian'ny fampisehoana miaraka amin'ny RAM 2 GB ary ny chip quad-core dia miorina amin'ny 1,3 GHz. Ny zavatra hitako tamin'ny fotoana sasany dia kely tsy fahampian'ny valinteny, saingy kely dia hitako.
Ny famolavolana dia tsy mifanaraka amin'ny ankoatr'izany, satria isika dia miatrika a terminal misy fonenana plastika. Ka mankany amin'ny fitaovana iray izay manolotra andian-tombony lehibe toy ireo voalaza etsy ambony ary sary feno tanteraka. Mahatalanjona ny fakan-tsary voalohany, na dia ny sary nalaina niaraka tamin'ilay voalohany aza dia nivoaka "watercolors" kely, na dia eny aza, ny fandanjana ny loko dia miavaka toy ny ohatra sary omena etsy ambany:
Izay tsy tiako
Ho fohy aho. Tsy tiako ny toerana misy ilay jack audio any amin'ny ilany havia ambany (mety ho efa zatra ny toerana eo amin'ny tapany ambony aho), ny headphones dia tsy dia ergonomic loatra (azo atao ny manana ny hafa, satria ny kalitaon'ny feo tsara) ary izany tsy fahampian'ny sensor sensor. Ny tsy fisian'ny scanner an'ny dian-tànana no tena malahelo ahy indrindra amin'ny LG X Power.
Raha nanana mpandahateny anoloana izy, premium kokoa ny sensor sy ny endriny raha tsy misy an'io plastika io, angamba, noho io bateria tsy manam-paharoa azonao hadinoina io ny finday mandritra ny roa andro, mety ho izany finday izay hovidiko tsy mieritreritra. Ny efijery dia manana kalitao lehibe ary ho vahaolana HD, na dia im-betsaka aza aho no nibanjina azy tamim-pahajery kely.
Tsotra izany, raha mitady a farany ambany miaraka amin'ny bateria lehibe, ny LG X Power no fividianana tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy, raha mitady iray misy fakantsary roa ianao ary mahay mandanjalanja, ny LG X Cam.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fiheverana voalohany an'ny LG X Power, terminal misy bateria matanjaka
Ana Amelia dia hoy izy:
Azafady mba apetraho ny pokemongo, ary raha tsy afaka endasina endasina endasina ao rehefa afaka kelikely, dia tsara. Satria amin'ny telita LGG4
Valiny tamin'i Ana Amelia
Ny lohatenin'ny vaovao dia nosoratan'i Yoda